AKHRISO: Natiijada Imtixaanka Dugsiyada sare oo la shaaciyay – HalQaran.com
AKHRISO: Natiijada Imtixaanka Dugsiyada sare oo la shaaciyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Waxbarashada ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa goor-dhow Axadda Maanta ah ku dhawaaday natiijada Imtixaankii Dugsiyada sare oo ay sanadkaan qaaday Wasaaradda.
Imtixaanka dowladda sanadkan waxaa ka qaybgalay inka badan 34-kun oo arday oo kala jooga deegaannada Jubbaland, koofur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir.
Sanadkii labaad oo xiriir ah Ardayda deegaannada dowlad goboleedka Puntland ayaan ka qeyb gelin Imtixaanka wasaaradda waxbarashada.
Munaasabad kooban oo lagu shaaciyay Imtianaka ayaa ka dhacday Magaalada Muqdisho taas oo ay ka soo qeyb galeen, sii-hayaha xilka Wasaaradda waxbarashada iyo Xubnaha kale ee Wasaaradda.
Waxaana munaasabadda lagu shaaciyay Magacyada 100-ka Arday ee ugu dhibcaha badnaa Imtixaanka sanadkaan.
Ugu dambeyn, tirada rasmiga ah ee Imtixaanka sanadkaan gashay waa 33, 727, waxaa baasay 25, 177 halka ay dhaceen 8,550 oo isugu jira 5,231 oo Wiilal ah iyo 3,319 Gabdho ah.
Halka hoose Ka akhariso Magacyada Liiska Ardayda 100-ka ee la shaaciyay:
↓Sii Akhri Wararka Maanta oo Xiiso Leh:
DAAWO VIDEO: Nuxurka Khudbadii Axmed Madoobe & arrimo xasaasi oo uu ka hadlay
Axmed Madoobe ‘‘Markii la ogaaday in Aniga & Deni aynu tagayno Shirka Dhuusamareeb3 waa la soo gabagabeeyay”!
Ciidamada Kumaandooska Danab oo gaaray deegaanka Shabeelow ee lagu dagaalamay
Wariyeyaal lagu xiray magaalada Garoowe, kaddib markii…
Farmajo okays all FMS leaders to attend Mogadishu talks
Tags: Ardayda ku baastay imtixaanka dowladda, Natiijada imtixaanka dugsiyada sare oo la shaaciyay